Ukunyamekela nokuya kwiSakhono sokuQala kokuQala
Ootitshala IziCwangciso kunye neziCwangciso zeziFundo
Ukunceda Abantwana Abakhubazekile Ukuhlala Nokuphulaphula
Ukuya kubakho ubuchule bokuqala abantwana abakhubazekileyo kufuneka bafunde. Kungaba ngumceli ngakumbi kubantwana abancinci abanokulibaziseka kokuphuhliswa okanye iziphazamiso ze-autism. Ukuze bafunde, kufuneka bahlale bemi. Ukuze bafunde, kufuneka bakwazi ukuza kutitshala, ukuphulaphula nokuphendula xa kuceliwe.
Ukuya kuhambo lokufunda. Abazali bafundisa kaninzi. Bafundisa xa bekulindele ukuba abantwana babo bahlale etafileni ngexesha lokutya.
Bafundisa ukuba bathabatha abantwana babo ebandleni baze bacele ukuba bahlale kuzo zonke okanye inxalenye yenkonzo yonqulo. Bafundisa ngokufunda ngokuvakalayo kubantwana babo. Uphando luye lwabonisa ukuba indlela ephumelelayo yokufundisa ukufunda ibizwa ngokuba "indlela yokwaphuka." Abantwana bahlala ematyaleni abo omzali baze baphulaphule bafunde, balandele amehlo abo baze balandele umbhalo njengoko iphepha liphendukile.
Abantwana abakhubazekileyo bahlala benenkathazo ukuya. Kwiminyaka emibili okanye emithathu abanako ukuhlala kwi-10 okanye imizuzu eyi-15. Basenokuphazamiseka lula, okanye, ukuba bahlala kumbono we-autism, abanakho ukuqonda ukuba bafanele bahambele ntoni. Abanalo "ukunxibelelana ngokubambisana," apho ngokuqhelekileyo abantwana abakhula balandela amehlo abo abazali ukuba bafune ukuba bakuphi na.
Ngaphambi kokuba ungalindela umntwana okhubazekileyo ukuba ahlale kwixesha lesangqa lemizuzu engama-20, kufuneka uqale ngezakhono ezisisiseko.
Ukuhlala kwenye indawo
Bonke abantwana baxhaswa ngabanye ngezinto ezintathu: ingqalelo, izinto ezifunwayo okanye ukuphepha.
Abantwana bashukunyiswa yimisebenzi ekhethiweyo, igalelo lentsingiselo, okanye ukutya. Ezi zintathu zokugqibela zithi "ziphambili" ziqinisile ngenxa yokuba ziqinisa. Abanye-ingqwalasela, izinto ezifunwayo, okanye ukuphepha - zilungiswe okanye ziqiniswe ngokusesikweni kuba zifunyenwe kwaye ziyaxhunyaniswa nezinto ezenzeka kwizicwangciso zesiganeko.
Ukufundisa abantwana abancinci ukuba bafunde ukuhlala, sebenzisa ixesha lokufundisa ngabanye ukuhlala nomntwana ngomsebenzi okhethwayo okanye u-reinforcer. Kungenzeka kube lula nje ukuhlala imizuzu emihlanu kwaye umntwana axelise into oyenzayo: "Chukumisa impumlo yakho." "Umsebenzi omhle!" "Yenza oku." "Umsebenzi omhle!" Imivuzo engabonakaliyo ingasetyenziselwa kwishedyuli engavumelekanga: zonke iimpendulo ezi-3 ukuya kwezi-5 zichanekileyo, zinike umntwana isikhephe okanye isiqhamo sesithelo. Emva kwexesha, indumiso yotitshala iya kwanele ukuqinisa iimpawu ozifunayo. Ukwakhiwa kokomeleza "ishedyuli," ukudibanisa udumo kunye nokukhetha into, uya kukwazi ukuqala ukuqinisa iqhaza lomntwana kwiqela.
U-Little uJoseph unokuhlala kwiiseshoni ngamnye kodwa angaduka ngexesha leqela: Kakade, uncedo kufuneka abuyisele kwisihlalo sabo. Xa uJoseph uphumelela ukuhlala ngexesha leeseshoni, kufuneka avuzwe ngokuhlala ixesha elide. Ibhodi yokutshintshi yindlela efanelekileyo yokuqinisa ukuhlala okulungileyo: kuzo zonke iimpawu ezine ezihambileyo, uJoseph uya kufumana umsebenzi okhethiweyo okanye mhlawumbi into ekhethiweyo. Kungaba luncedo kakhulu ukuthatha uJosea kwenye inxalenye yeklasini emva kokufumana iimpawu zakhe (imizuzu yakhe eyi-10 okanye eyi-15 yeqela).
Amaqela okufundisa ukuba abe khona
Kukho iindlela ezibalulekileyo zokwakha ingqwalasela yeqela ngendlela eqhuba ngayo imisebenzi yeqela:
Gcina ixesha elifutshane lembombo ukuqala. Isikhathi sokujikeleza akufanele sibe ngaphezu kwemizuzu engama-15 xa uqala kodwa kufuneka ukhule ube ngama-30 emva kweenyanga ezintathu okanye ezine.
Hlanganisa. Ixesha lokujikeleza akufanele nje libe yimisebenzi ekhulileyo njengeencwadi zamabali, kodwa kufuneka zibandakanya iingoma zokunyakaza, imidlalo yokudansa kunye nokunyakaza, kwaye unike amathuba ahlukeneyo abantwana ukuba bakhokele iqela.
Ukuphakamisa inxaxheba: Ukuba ubeka usuku kwikhalenda, unomntwana omnye athole inombolo, omnye umntwana abeke inombolo kwaye umntwana wesithathu abale inani.
Udumiso, udumiso, udumiso: Sebenzisa udumo kungekuphela nje ukuvuza umgangatho wokuziphatha kakuhle kodwa ukufundisa. "Ndiyathanda indlela uJamie ehleli ngayo!" "Ndiyathanda ukuba uBrie unezinyawo zombini phantsi." Ukubiza ukuziphatha kunamandla: kubonisa wonke umntu ukuba ukuziphatha kubonakala njani, ngexesha elifanayo.
Qiniseka: Akunakwenzeka ukubiza bonke abantwana ngokulinganayo, nangona kunokwenzeka ngezinye izihlandlo kunokuba luncedo ukuba umphathi wakho okanye elinye kwiklasi lakho lenze ishadi elithe wabiza ngalo: unokumangaliswa oko ufumanisayo. Sambona utitshala kwaye safumanisa ukuba 1) wabiza abafana ngokuphindaphindiweyo njengamantombazana, kodwa basebenzisa imibuzo ukugcina abafana emsebenzini. 2) Vumela loo nto mbazana ukuba iphazamise: yayiza kuyiphendula imibuzo yabo xa ikhupha.
Qiniseka ukuba wonke umntu ufumana ithuba lokuthatha inxaxheba. Qamba igama lokuziphatha ophawulayo, ngokunjalo. "UJohn, ndifuna ukuba uze uyenze imozulu kuba uhlezi kakuhle."
Indlela yokuqhawula kwiClassi
Buyela kwiSibonelelo seSikolo sokuQala uNyaka
Ukufundisa ukuqonda ukuFunda kwabafundi beDyslexic
Amageyimu Abafundi abakhubazekileyo Ukudlala
Imfundo ekhethekileyo kunye nokuNikwa
Iimpawu zombhalo ukuhamba - Iziqulatho, i-Glossary kunye ne-Index
CREEP, NIxon, kunye ne-Watergate Scandal
Ukuthungulwa kwamahlathi eAsia
Ingqungquthela yasemadeni: I-AIDS engumngcipheko ngokusebenzisa izigulane ezifihlakeleyo
Yonke Into Okufuneka Uyazi Ngomhla wesiFrentshi waseBastille
Kutheni Ungafanele Uze Uthabathe Umsebenzi Ngezantsi Kwinqanaba Lakho Lobuchule
Bala Ukugxininiswa kweIons kwiSolution
'I-Vos' isetyenziswa njani e-Argentina?
Izinto ezi-5 zokwazi malunga ne-Gymnast Cheng Fei
Ngubani owafaka iTelescope?
Iphrofayili yeSerial Killer, Cannibal kunye neNecrophilliac uRichard Chase
Umzekelo Isivakalisi soLungiso lweLwimi
Ukuguqulelwa kweCopenhagen yeeMountum Mechanics
I-Streetcar Igama elibizwa ngokuba yiNqweno-IsiThathu